Isbaheysiga Sacuudiga hogaamiyo oo duqeyn u geystay garoon military ee Sanca… – Hagaag.com
Isbaheysiga Sacuudiga hogaamiyo oo duqeyn u geystay garoon military ee Sanca…
Posted on 2 Nofeembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiyiinta ayaa duqeeyay garoon military oo ku dhow kan caalamiga ah ee magaalada caasimada ah ee Sanca.
Saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada xulufada ayaa sheegay in garoonka loo adeegsanayay in laga hago diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan Drone-ka iyo abaabulka weerarada gantaalaha ballistic-da loo yaqaan.
Afhayeenka ciidanka isbaheysiga Colonel Turki al-Malki ayaa sheegay jimcaha maanta in duqeymahan aysan waxyeelo u geysan howlaha hey’adaha gargaarka ee isticmaaala garoonka diyaaradaha magaalada Sanca.
Isaga oo la hadlayay Tv-ga boqortooyada ee al-Ekhbaria TV ayaa waxaa uu sheegay in shir Jaraa’id ay ku soo bandhigi doonan gelinka danbe ee maanta cadeymaha ku aadan in garoonka ay isticmaalayeen kooxaha xuutiyiinta.
Dhanka kale warbaahinta kooxda Xuutiyiinta ee Al-Masirah ayaan ka hadlin sheegashada Sacuudiga, marka laga soo tago in ay shaacisay in 30 gantaal lagu garaacay garoonka al-Dulaimi.
Duqeymahan ayaa imaanaya saacado kadib markii dowlada caalamka taageersan yahay ee Yemen ay sheegtay in ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho dagaal yahanada Xuutiyiinta.